Galaalee malattoo bantee gulaaluuf, bafata kana fayyadami, ykn foormulaa alaantoo akka faayila deetaatti alaagi. Walquunnamii sagantaa fedhii kee guutuuf mijaa'uu nidandaa'a. Akkasuumas dirqalawwan sagantaa jijjiiruu nidandeessa.
Qaaqa Mallattoole bana, bakka atii mallattoo foormulaa keessa saagdu filachuu dandeessu dha.
Ajajni kun qaaqa alaaguu foormulaa bana.